Banyere Anyị - Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd.
Anyị na-achọ mmepe mmekọrịta niile na ndị mmekọ ogologo oge ma gbalịsie ike inye onyinye maka ụmụ mmadụ na ụwa.
Ndị mmadụ, nchekwa na nchedo gburugburu ebe obibi, sayensị na teknụzụ
Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ kemịkalụ dị elu na teknụzụ. Hergbaso mmepe nkà ihe ọmụma nke "ịbụ ndị mmadụ na-ndị dabeere, mma na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi, na a na nkà na ụzụ ika", anyị na-akwado ọtụtụ ama anụ ụlọ na mba ọkachamara chemical nnyocha institutes iwebata elu na tozuru okè n'ichepụta ụzọ na-emepụta a usoro nke àgwà ngwaahịa , gụnyere 50,000 t / a nke 3-Chloro-2-methylpropene (MAC); 28,000 t / a nke 2-Methyl-2-propen-1-ol (MAOH); 8,000 t / a nke Sodium methallyl sulfonate (SMAS); 5,000 t / a nke acrylic fiber na 2,000 t / a nke polyimide fiber mmanụ, wdg. N'ihi na-aga n'ihu na nkà na ụzụ ọhụrụ, anyị nwere ezi ikike welie asọmpi nke ngwaahịa na ahịa.
Ugbu a, anyị na ngwaahịa na-ọma na-ere ihe karịrị mba 50 dị ka United States, Japan, Germany na France, wdg N'otu oge ahụ, anyị na-ọma ịbụ ẹkedọhọde soplaya nke PetroChina na Sinopec, na onye òtù ọlụlụ nke zuru ụwa ọnụ n'elu Companieslọ ọrụ 500.
Na afọ 'ngwa, anyị na ngwaahịa na-ukwuu ghọtara site ahịa anyị maka magburu onwe ya mma na aha. Ugbu a, anyị ngwaahịa e n'ọtụtụ ebe e na mmanụ ala Chemicals, ọgwụ, ọgwụ, mmanụ, mmanụ acrylic eriri inyeaka, ndị ọhụrụ ọgbọ nke elu-oru oma mmiri mbenata gị n'ụlọnga maka ihe na akwụkwọ na-eme ụlọ ọrụ, wdg Ndị ọzọ na ngwaahịa: Anyị gbanwetụrụ polyester eriri ( tinyere mmanụ abụ ndị yiri Porous dị ka mmanụ a -ụ na mmanụ ọhụụ ọhụụ ọhụrụ maka ịcha ụcha na ịtụ ogho emeela ọtụtụ nsogbu na ịkpa ákwà, gụnyere akwa ọsọ ọsọ nke Porous na ụgbụgbọ mmanụ a likeụ dịka polyester gbanwere agbanwe, imetụ nke owu e ji esiji, na antistatic na ịgba , wdg.
Anyị kwenyere na anyị ga-abụ onye ndu nke azụmaahịa a na ụwa gbasara ogo na ọnụahịa! "Ngwaahịa dị mma, ọnụ ahịa dị mma na ọrụ ndị nwere ezi obi" bụ ntinye anyị. Anyị na-achọ mmepe mmekọrịta anyị na ndị mmekọ niile ogologo oge ma na-agbasi mbọ ike inye onyinye mmadụ na ụmụ mmadụ.
Nzube ahia nke ulo oru
The nkà ihe ọmụma azụmahịa nke enterprise bụ mkpụrụ obi nke ụlọọrụ omenala, mmepe direction nke enterprise, ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ ndụ, na ike nke enterprise iji kpọkọta ndị mmadụ. Mgbe ụlọ ọrụ ruru ọkwa ụfọdụ, ọ ga-edozi nsogbu atọ. Otu bụ ihe kpatara na ọ dị mkpa iji na-agba ọsọ ụlọ ọrụ. Kedu ụdị ụlọ ọrụ iji gbaa ọsọ, nke a bụ ajụjụ maka ebumnuche na ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke abuo bu uzo esi agba oru. Nke a bụ ajụjụ nke usoro. Nke atọ bụ ịdabere na onye na-agba ahịa ahụ. Nke a bụ isi ihe na-aga nke ọma azụmaahịa. Nsogbu atọ a bụ nsogbu ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ wepụtara site na nkà ihe ọmụma azụmahịa. Mgbe anyị guzobere nkà ihe ọmụma azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, dabere na nghọta anyị nwere n'okwu atọ a, anyị chepụtara ebumnuche nke "ịmepụta akụ na ụba na nkwekọ kwekọrọ" na ụkpụrụ nke "ihe ọhụrụ, nkwekọ, na mmepe." Ebumnuche anyị bụ iwulite ụlọ ọrụ n'ime ụlọ A nke izizi, mba ofesi-ọkachamara na -emepụta kemịkal ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmanụ na ihe mgbaze.
High Quality Ngwaahịa, Preferential Prices, Ezi Ọrụ